ISinocare ifundele i-2018 Middle Medlab East eDubai-News-Sinocare
USinocare uhambele i-2018 Middle Medlab East eDubai
Isikhathi: 2019-08-16 Hits: 210
Ukuze kukhuthazwe ukubambisana kwezomnotho kanye nezohwebo kanye nokuhwebelana kwezobuchwepheshe phakathi komphakathi wezokwelapha waseChina kanye nomkhakha womhlaba jikelele nokuqonda ukuthambekela kokuthuthuka komkhakha wezokwelapha wamazwe omhlaba, iSinocare iqale ukubonakala eMEDLAB MIDDLE EAST 2018 (efushaniswe njengeMEDLAB) IDubai, i-Arabia, ethwele uchungechunge lwemikhiqizo efaka amamitha eglucose egazi, ukudla okunesifo sikashukela nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, kanye nemikhiqizo yokuthola izinkomba eziningi yezifo ezingamahlalakhona.
IMedlab Middle East ekuqaleni ibiyingxenye ebalulekile ye-Arab Health, kepha ibibanjelwe ngokuzimela kusukela ngonyaka we-2017. IMEDLAB Middle East 2018, njengeplatifomu enkulu kwezobuchwepheshe emkhakheni wezinsizakusebenza zelebhu yezokwelapha nemishini yokuhlola eMiddle East kanye nasemhlabeni wonke, ihehile izinkampani ezingaphezu kwama-600 ezivela kuwo wonke umhlaba ukukhombisa imikhiqizo yakamuva kanye nobuchwepheshe besimanje bomkhakha kulo mbukiso. Ngaphezu kwalokho, ihehe izivakashi ezingaphezulu kwezingama-25,000 eziqhamuka emazweni nezifunda eziyi-129 ukujoyina lo mbukiso. Ngenxa yokukhula okungaguquki kwesidingo semakethe semishini yezokwelapha eMiddle East kanye nokuthuthuka okuqhubekayo kwezinsizakalo zezokwelapha, abahlinzeki bemishini yezokwelapha abaningi abadumile emhlabeni babuthane eDubai ukuze babambe iqhaza kulo mbukiso.
ISinocare, ebikhombisa izikhathi ezine ezilandelanayo, ilethe amamitha amaningi eglucose yegazi nemikhiqizo yokuthola izinkomba eziningi yezifo ezingamahlalakhona kubavakashi balo mbukiso. ITrividia Health Inc. ne-PTS, okuyizinkampani ezimbili zaseMelika futhi ngokulandelana zatholwa yiSinocare ngoJanuwari nangoJulayi ka-2016, nazo zikhombise imikhiqizo yazo efakiwe-- “Zhenrui” ukunakekelwa kwesikhumba nemikhiqizo yokudla, i- “Zhenrui” series blood glucose meters, A1CNow , neCardioChek® P · A. Phakathi kwabo, i-A1CNow + ephethwe ngesandla i-hemoglobin analyzer ephethwe ngesandla idinga kuphela igazi elincane lomunwe (5μL) ukuhlola inani le-HbA1c futhi imiphumela ingatholwa kungakapheli imizuzu engu-5, esebenza kahle kunokuhlolwa kwelabhorethri, okuheha izivakashi eziningi ukubonisana.
IMIKHIQIZO YEZINKANYEZI YETRIVIDIA HEALTH INC. KANYE NE-PTS ZIBONILE KULOMBONISO
Lapho bebuzwa ukuthi kungani i-A1CNow ithandwa kangaka, abasebenzi boMnyango Wamazwe Omhlaba weSinocare bachaze ukuthi: “Lo mkhiqizo mncane futhi uyaphatheka futhi ungasetshenziswa ezigabeni eziningi. Kulula ukusebenza futhi kudinga ukuqeqeshwa okulula kuphela ukuze ufunde ukusebenza. Ngakho-ke, izivakashi ziyayithanda kakhulu. Ingasetshenziswa noma nini nanoma kuphi, okuyinto evumelana nalokho. ”
UCHUNGECHUNGE IMIKHIQIZO YOKUPHILA KWENZUZO YOKUHAMBA YAKHANGELA IZIVAKASHI EZININGI
Kukhona futhi nochungechunge lwamamitha we-Sinocare eglucose egazi akhombisa kulo mbukiso kufaka phakathi i-Safe-Accu, Safe-Accu2, Safe AQ Smart, Safe AQ Voice, Gold-Accu, Gold AQ, EA-12, neD'nurse. Ngomsebenzi omuhle kakhulu "wokulinganisa ngasikhathi sinye i-glucose yegazi ne-uric acid ngeqoqo elilodwa legazi", imikhiqizo yokuthola izinkomba eziphindwe kabili zeSinocare, i-EA-12 yeglucose yegazi kanye ne-uric acid tester nayo ibingenye yezinto ezivelele kulo mbukiso.
Yize kunesibalo esikhulu sabantu abanesifo sikashukela eChina, iSaudi Arabia eMiddle East inesifo sikashukela esiphakeme kakhulu, nokungezinye zezizathu ezenza ukuthi umtshina we-hemoclobin weSinocare nemikhiqizo yokuthola izinkomba ezimbili ithandwa kakhulu phakathi kwezivakashi zalo mbukiso . UMnyango Wezempilo waseSaudi Arabia ubambisene ne-Institute for Health Metrics and Evaluation of University of Washington ukwenza ucwaningo ngokudlanga kwesifo sikashukela eSaudi Arabia. Umphumela wenhlolovo ukhombise ukuthi ukubhebhetheka kwesifo sikashukela ezakhamuzini cishe kwaba ngu-13.4%. Izimbangela ezinkulu zokwanda kwesifo sikashukela eSaudi Arabia yizinguquko zendlela yokuphila, ukukhuphuka kwamazinga okukhuluphala, kanye nokuntuleka kokuvivinya umzimba. Futhi uma isifo sikashukela singelashwa kahle, kungenzeka kutholakale uchungechunge lwezinkinga. Imininingwane efanele ikhombisile ukuthi izinga lokufa kwabantu abanesifo sikashukela likhulu kunenani eliphelele lokufa kwengculaza, isifo sofuba kanye nomalaleveva.
AMALUNGU OMKHAYA WESINOCARE AHAMBE LOMBONISO
Njengesikhungo esikhulu kunazo zonke sokuhweba kanye nesikhungo sokuhambisa izimpahla zokuhamba eMiddle East, iDubai inendawo enhle kakhulu yezwe nemisebe ebanzi yemakethe. Ngakho-ke, ibizwa ngokuthi "indawo enkulu kunazo zonke emhlabeni" kanye ne- "Hongkong yaseMpumalanga Ephakathi". Muva nje, ngokuthuthuka okusheshayo kwabantu eMiddle East, isidingo semishini yezokwelapha, ezokwelapha nezinsizakalo zezokwelapha sikhula kancane kancane. Ebhekene nezidingo ezinkulu zezokwelapha, uHulumeni waseSaudi Arabia ubelokhu esebenza ngenkuthalo akha ingqalasizinda futhi ekhuthaza izimali ezizimele ukungena emakethe yezinsizakalo zezokwelapha. Ngokuya ngezibalo ezifanele, eminyakeni yamuva nje, inani lokuthunyelwa ngaphandle kwemikhiqizo yezinsiza zokwelashwa eMiddle East yezwe lethu belilokhu ligcinwa liphakathi kwezigidi ezingama-20 kanye nezigidi ezingama-30 zamadola aseMelika unyaka nonyaka. Ngokwemibiko yabezindaba zakwamanye amazwe, usayizi ophelele wemakethe yezinsiza zokwelashwa eMiddle East weqe ama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-10.
Ikhasi Langaphambili: Ukubambisana kuka-2018 Sinocare no-YUELU SUMMIT 2018
Ikhasi elilandelayo: ISinocare iklonyeliswe ngo- “Brand of the Year” kuma-10th Healthy The China Awards